Vaovao - Inona ny loko 1k ary inona indray ny loko 2K?
Ny loko 1k dia loko misy singa iray, ny loko 2K dia loko misy singa roa.Ny loko misy singa iray dia azo hosodoko amin'ny alàlan'ny dilution amin'ny ampahany iray, ary ny loko misy singa roa dia mila ampiana amin'ny fanafody fanasitranana ary avy eo dia azo ampiharina amin'ny dilution amin'ny ampahany.
Ny loko 1K dia alefa mivantana aorian'ny fandotoana, izay fomba roa mandalo.Ny tahan'ny fampifangaroana amin'ny dilution dia 1: 1, ary tsy ilaina ny fanafody.Satria ny loko 1K dia ao anatin'ny toetry ny matte aorian'ny famafazana sy ny fanasitranana, dia tsy maintsy tifirina mivantana eo amin'ny faritry ny loko fototra izy io aorian'ny fampiasana varnish, manasitrana ary manatsara kokoa.
Misy fitsipika roa fanamainana ho an'ny loko iray misy singa.
1. Loko misy menaka (huile de légumes), ao anatin'izany ny: loko resin misy menaka, loko alkyd, sns. Fanamainana oxidative amin'ny rivotra noho ny fatorana roa tsy mahavoky.Ny foto-kevitry ny fanamainana dia ny fatorana roa tsy satry ao anaty menaka dia tapaka amin'ny alàlan'ny fidiran'ny oksizenina mba hamokarana radika maimaim-poana, izay mifamatotra sy sitrana mba hamorona sarimihetsika.Ity loko ity dia misy maina, izay feno azota mandritra ny famonosana mba hisorohana ny endriky ny loko tsy hikorontana.
2. Volatile fanamainana loko.Ny fitsipiky ny fanamainana dia ny miantehitra amin'ny volatilization ny solvent mba hitsaboana mba hamorona sarimihetsika.Ny lanjan'ny molekiola amin'ny resin amin'ity loko ity dia lehibe amin'ny ankapobeny, ny fanoherana ny solvent amin'ny sarimihetsika hosodoko dia tsy tsara, ary ny flexibility dia tsara.
Ny loko 1K dia loko misy singa iray, ary ny loko 2K dia loko misy singa roa.
1. Loko misy singa iray, ny loko lehibe miampy thinner, sarimihetsika mahamainty tena, tsy misy fanehoan-kevitra simika.Tombontsoa: haingana fanamainana, tsara recoatability, tsara borosy fampisehoana.Ny tsy fahampiana: Tonga tsikelikely ny fahafenoana, ny hamafin'ny salan'isa, tsy mahatohitra solvents, ary tsy mahatohitra ny mari-pana ambony.
2. Loko misy singa roa, loko lehibe miampy fanafody manasitrana miampy manify, ny loko lehibe sy ny mpanadio dia mamaly zavatra simika ka mamorona sarimihetsika.Tombontsoa: feno, mafy, solvent fanoherana.Ny tsy fahampiana: Ny fanorenana dia somary henjana, ary ny hafainganana dia miadana kokoa noho ny an'ny singa tokana.
Fotoana fandefasana: May-05-2022